साँचो बाटो! परमेश्वरको राज्य चाँडै आउँदैछ! TheTrueWay.xyz | बाइबल सत्यहरू व्याख्या गरियो - द ट्रू वे - TheTrueWay.xyz र jwjw.org
साँचो बाटो! परमेश्वरको राज्य चाँडै आउँदैछ! TheTrueWay.xyz
प्रिन्ट गर्नुहोस् 🖨 पीडीएफ 📄 ईबुक
साँचो बाटो! परमेश्वरको राज्य चाँडै आउँदैछ!
परमेश्वरको वचन w होhat मानिसहरूले खोज्नु पर्छ। यो सत्यको चम्किलो ज्योति हो जसले मानिसहरूलाई आफ्नो उपासनालाई सर्वशक्तिमानमा सीधा गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
यस आन्दोलनको मिशन ख्रीष्टका प्रारम्भिक चेलाहरूको मौलिक विश्वासहरूमा सकेसम्म टाढा जानु हो, भित्र पसेका झूटा सिद्धान्तहरूलाई हटाउँदै। प्रथम चेलाहरूको शुद्ध उपासनालाई "मार्ग" भनिन्छ।प्रेरित 9: 1-2)। त्यसैले, यो मिशनलाई सत्य मार्ग भनिन्छ।
यो साइट मानिसहरूलाई आफ्नै लागि वा सेवकाईको लागि कथाहरू र विषयहरू छाप्नको लागि डिजाइन गरिएको हो!
सत्यलाई प्रश्न गर्न मन लाग्दैन तर झूटले गर्छ।
त्यहाँ धेरै मानिसहरू र संगठनहरू छन् जुन मानिसहरूले उनीहरूलाई हेर्न चाहन्छन्, परमेश्वरको समर्थन र शक्तिशाली चिन्हहरू प्रदर्शन गर्ने दाबी गर्छन्। तर परमेश्वरका जनहरूलाई मूर्ख बनाइनेछैन। मानिसको वचनले मात्र निराशातर्फ डोऱ्याउँछ। यर्मिया 10: 23
परमेश्वरका प्रेमीहरूले सधैं आश्वासन र निर्देशनको लागि परमेश्वरको सन्देशहरू हेर्नेछन्। यो साइटले मानिसहरूलाई उनीहरूको विश्वास जाँच गर्न र आवश्यक भएमा तिनीहरूको आराधना समायोजन गर्न र सर्वशक्तिमानसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न मद्दत गर्दछ। प्रेरित 17: 11-12
तपाईंले आफ्नो विश्वास जाँच्नुपर्ने आवश्यकता छैन जस्तो लाग्न सक्छ। ठ्याक्कै त्यही हो महान विरोधी सर्वशक्तिमान तपाईं सोच्न चाहन्छ। ऊ परमेश्वर भन्दा मानिसका वचन पछ्याएको उहाँ चाहनुहुन्छ। जटिलता खतरनाक हुन सक्छ।
निरीक्षणको दिनमा हामी हाम्रो उपासनालाई सीधा बनाएको पाउन सकिन्छ!
फेसबुक समूहमा जानुहोस्
© २०२१ द ट्रू वे! परमेश्वरको राज्य चाँडै आउँदैछ! TheTrueWay.xyz